Biladaha Ciyaaraha Marathon-ka ee Macaamiil Loo Sameeyay
Midabaynta: nikkel qaraami ah
Iyada oo khibradeena shaqo ee barwaaqo iyo xalalka fekerka leh, hadda waxaa naloo tixgeliyey inaan noqono alaab-qeybiye lagu kalsoonaan karo oo iibsadayaal badan oo qaaradda ah oo iibsanaya OEM Customized China Customized Wholesale Metal 3D Medallion Coin Ust Soft Enamel Souvenir Challenge Coin (189), iyadoo loo hoggaansamayo falsafadda shirkadda. ee ah 'macmiil marka hore, hore u sii soco', waxaan si kal iyo laab ah u soo dhaweynaynaa dadka wax ka iibsanaya ee ka socda gurigaaga iyo dibaddaba si ay noola shaqeeyaan.
OEM Customized Shiinaha Challenge Coin Soo bandhigida Case iyo Challenge Coin Caaga Sleeves qiimaha, Iyada oo tayo wanaagsan, qiimo macquul ah iyo adeeg daacad ah, waxaan ku raaxaysan sumcad wanaagsan. Badeecada ayaa loo dhoofiyaa Koonfurta Ameerika, Australia, Koonfur-bari Aasiya iyo wixii la mid ah. Si diiran u soo dhawow macaamiisha gudaha iyo dibaddaba si ay noolashaqeeyaan mustaqbalka wanaagsan.
Hore: Bilad Shahaadaysan oo Carruur ah
Xiga: Cute Animal Hard Enamel Furayaasha Birta Gaarka ah